DepositPhotos: Ọnụahịa Ndị Dị Ezigbo Ego na-enweghị Akaụntụ na Nchọgharị Onyonyo! | Martech Zone
Anyị na-eji tọn foto ngwaahịa na-enweghị eze. Site na saịtị anyị, blog posts, whitepapers, yana ọdịnaya niile anyị mepụtara maka ndị ahịa, akwụkwọ akwụmụgwọ foto anyị nwere ọtụtụ narị dollar kwa ọnwa. Ọ dị ka ozugbo m mejupụtara akaụntụ ahụ, ọ ga-abụ ihe efu n'ime otu izu ma ọ bụ karịa. Anyị ji ụfọdụ foto a ma ama na ebe nrụọrụ anyị kwụọ ụgwọ dị oke ọnụ.
Kedu ihe bụ n'efu-eze
Ihe oyiyi enweghị ikike, ma ọ bụ RF, na-enye ohere iji ojiji onyonyo ejedebe na enweghị mkpa ịkwụ ụgwọ maka ojiji ọ bụla. Iji maa atụ, ọ bụrụ n ’ịzụrụ ihe onyonyo na - enweghị eze maka saịtị anyị, anyị nwere ike iji ya ugboro ugboro na saịtị anyị yana nkwa anyị (ọ dabere na onye na - ere ya). Agbanyeghị, anyị enweghị ike ịre ma ọ bụ jiri ya maka ndị ahịa anyị. Ma ọ bụrụ na anyị jiri ya maka onye ahịa anyị, anyị enweghị ike iji ya maka nkwekọrịta anyị. Kpachara anya n'ịgụ ezi mbipụta na ojiji! Arefọdụ bụ nanị maka azụmahịa na-abụghị nke azụmahịa, ndị ọzọ nwere ike ịnwe oge ma ọ bụ ọnụọgụ nke ojiji.
Ọ bụrụ n ’imebi usoro ojiji na onyonyo ndị akwụghị ụgwọ ndị eze, inwere ike inweta akwụkwọ ozi n’aka onye nwe ikike ahụ. Ha na acho ka otutu narị ma obu puku kwuru puku dollar na nloghachi maka njiri eme ihe… ma yie ihe gbasara iwu ma oburu na ikwenyeghi. Ọtụtụ ndị mmadụ na-amụ ihe ha, kwụọ ụgwọ ahụ, ma ga n'ihu.
Ego ole ka Royalty-Free Stock Photos efu?
Enwere ụgwọ dị iche iche maka foto ngwaahịa na ọtụtụ nyiwe na-arụ ọrụ na sistemụ. Ikwesiri itughari ego na dollar. Fọdụ bụ pennies ole na ole, dabere na nha nke onyonyo… ndị ọzọ nwere ike ịbụ ọtụtụ dollar kwa onyonyo. Ma ndị ọzọ na-akwụ ụgwọ maka onyonyo maka ojiji ọ bụla!
Ọ masịghị anyị ịkwụ ụgwọ dịka anyị mere n'ihi na anyị maara etu eserese na-enweghị isi maka ihe niile anyị na-eme. Ndị mmadụ na-eleghara mmetụta ọmarịcha foto nwere na ozi ha na-achọ ịkọ. Ndị na-eji Google Image Search achọta ma dabere na nchọta na-enweghị akwụ ụgwọ na-arịọ maka nsogbu! Ọtụtụ oge a na-eji ihe oyiyi eme ihe n'ụzọ na-adịghị mma na Google Image Search na-achọpụta ya site na saịtị ahụ, na-egosi na enweghị eze mgbe ọ na-adịghị.
Ọ bụ eziokwu… Foto dị na ya ruru otu puku okwu
Anyị na-ebi n'ime ụwa a na-ahụ anya. Yabụ ọ bụrụ na ị dị njikere ịkwụ ọtụtụ narị dollar maka ọdịnaya, itinye ego na onyonyo mara mma bụ enweghị echiche! Na DepositPhotos ka gbakwunyere ihe ngosiputa onyonyo na ngwakọta ha! E wezụga foto, ha na-enyekwa:
Foto Vector - Bido isi mbido ide akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ ozi nkọwa ihe osise ha na ihe ọzọ vector ihe oyiyi.
Illustrations - Don't chọghị vektọ ahụ? Naanị budata ya ihe osise na-enweghị eze ị chọrọ.
Videos - Chọrọ itinye ụfọdụ vidiyo vidiyo maka ndabere na saịtị gị ma ọ bụ vidiyo vidiyo maka vidiyo vidiyo ọzọ gị? Ha nwere oke nhọrọ.
Foto ederede - Na-achọ ụfọdụ onyonyo maka ojiji na-abụghị nke azụmahịa? Ha enweela oke nhọrọ nke akara na foto ndị ama ama nwere ike iji maka ọdịnaya ederede.
Music - chọrọ ụfọdụ egwu maka pọdkastị ma ọ bụ vidiyo intro na outro? Ha enweela oke nhọrọ!
Ọ bụghị ruo mgbe ìgwè ahụ nọ Depositphotos® kpọtụrụ m banyere blọọgụ anyị na ojiji anyị na-ese foto nke na achọpụtara m na anyị na-etinye ego karịa ego anyị nwere. Depositphotos bụ onye nkwado anyị na ịbubata foto ngwaahịa anyị Martech Zone yana ụlọ ọrụ m ndị ọzọ. Ezie na nke ahụ bụ ihe ịrịba ndibiat anyị, ịnye ọnụahịa gị dị ịtụnanya dị ka nke ọma!
Maka ihe dị ka $ 29 kwa ọnwa, ịnwere ike iji 30 ihe osise na-enweghị ikike eze kwa ọnwa site na Depositphotos! Nke ahụ bụ ọnụahịa dị egwu ma dịkwa mma maka azụmaahịa na-ebupụta blọgụ, akwụkwọ akụkọ, akwụkwọ ọmụmụ, ịkpọ oku, omume weebụ, na peeji ọdịda! Tinye foto ngwaahịa na - enweghị ego na ozi gị ma ị ga - ahụ etu esi rụpụta ihe ga - adị mma!
Debanye maka Depositphotos
Ngosipụta: Anyị na-eji nke anyị njikọ mmekọ maka DepositPhotos na post a!
Tags: nkwụnye egochọta ihe oyiyi na ntanetịnchọta onyonyo googleweghachite oyiyilaa azu oyiyirfeze n'efufoto ngwaahịa na-enweghị ezeOnye nkwadongwaahịa foto